Usungule isikhungo sokumodela owaseGrange | News24
Usungule isikhungo sokumodela owaseGrange
ISITHOMBE:sITHUNYELWEUMfundo Sibisi (kwesokunxele) kanye nenye yezintokazi ezingaphansi kwesikhungo sakhe uSnethemba Ngubo.
UKUNGABI nemali yokuphothula izifundo zakhe ze-Photography akuzange kuyiqede umdlandla insizwa esencane yaseMgungundlovu esivule isikhungo sokucija izimomondiya kwezokumodela.
UMfundo Sibisi (20) waseGrange usungule i-MS modelling agency ngonyaka ka 2015 ngesikhathi esenza izifundo zakhe ze-Photography eDurban University of Technology.
“Ngikhule ngiyithanda into ehlangene nokumodela kwabesifazane ngoba bengikholelwa kakhulu ekutheni kunendlela yakho yokugqugquzela ukuziphatha futhi kunyusa nokuzethemba kubona. Ngiqale ukulandela ezokumodela ngisafunda esikoleni samabanga aphezulu iSukuma eMbali. Bengithi njalo uma ngihambele imincintiswano yonobuhle ngithatheke indlela izintokazi ebezenza ngayo.Ngithe uma ngisenza izifundo zami ngabona kukuhle ukuthi ngisungule lesikhungo.”
USibisi uthi kuthe uma eseshodelwa amasenti okuphothula izifundo zakhe waphoqeleka ukuthi abuyele ekhaya eMgungundlovu.
“Isikhungo bese sizakhele udumo eThekwini, akubanga lula ngesikhathi ngibuya ngiza lapha eMgungundlovu ngoba bekufanele ngiqale yonke into phansi. Ngibone kungcono ngiqhubeke naso isikhungo kunokuthi ngihlale ekhaya ngingenzi lutho.”
Yize lensizwa ingakaze yona ingene kwezokumodela phambilini ithi isizinikeze isikhathi esanele ukufunda nokucubungula kabanzi lomkhakha.
“Ngizinika isikhathi ngicubungule konke okwenzeka kulomkhakha ngiphinde ngifunde izindlela zokukhulisa ibhizinisi lami ngokubuka ama-video ku YouTube ngibuye ngibe yingxenye yezifundo ezahlukene ezigxile kuwona lomkhakha wezokumodela.”
USibisi uthe lesikhungo sakhe sibhekelele kakhulu ukuqeqesha abantu abangakaze bamodela phambilini.
“Benginombono wokuthi ngicije lamantombazane angakaze amodela phambilini. Okukhulu ukuthi bengifuna ukuvulela nabanye abantu abasha abakulomkhakha amathuba emisebenzi ukuze nabo bezobeka isinkwa etafuleni.”
I-MS modelling agency kumanje inezintokazi ezisayinde ngaphansi kwayo ezingu 18 ezineminyaka engu 14 kuya ku 24.
Uma unesifiso sokuba yingxenye yalesikhungo ungaxhumana noMfundo Sibisi ku 074 808 0563 okanye uvakashele ikhasi labo likaFacebook ku MS modelling agency SA.